Soo Celiyaha Mawduuca Caadiga ah: U noqoshada interface-ka caadiga ah ee Firefox | Laga soo bilaabo Linux
Sida ay dad badani ogyihiin, Mozilla Firefox noocyadeeda soo socda waxay soo saari doontaa interface cusub oo ay ugu yeedheen Australis. Qaarkood way jecelyihiin (sidayda oo kale), qaar kalena way neceb yihiin, gaar ahaanna kooxdan ugu dambaysa ayaa maqaalkani u heellan yahay.
Fikradda waa in laga gudbo tan:
Dhammaantiisna waxay ku mahadsan tahay kordhin fudud oo la yiraahdo Dib-u-celiye Miisaaniyadeed Classic, taas oo mar la rakibo waxay na siisaa fursado badan oo aan ku habeyn karno muuqaalka Australis. Kordhinta lafteedu ma beddeleyso isdhexgalka cusub, laakiin waxay ku dari doontaa fursado cusub, oo ay ku jiraan xulashada noocyada kala duwan ee tabs. Kuwani waa qaababka 5 ee la heli karo:
Waxaa jira fursado badan oo dheeri ah oo loogu talagalay kordhintan, si loo habeeyo faahfaahin kasta oo ka mid ah isdhexgalkayaga. Tusaale ahaan, waxaan beddeli karnaa cabbirka badhamada ku yaal bar-tilmaameedka, ama awood u siin karnaa ikhtiyaarka aan ku wareejin karno. Waxaan sidoo kale badali karnaa midabada tabs.
Liiskii hore ee aan ku helnay noocyadii hore ee xiriirka Firefox-ka caadiga ah ayaa nagu soo laabanaya 🙂
Kordhintu waxay leedahay xulashooyin badan, sidaa darteed qof walba ayay ku xiran tahay inuu doorto midka uu dhaqaajinayo iyo haddii kale. Dhinaceyga, waxaan la joogayaa Asutralis sida ay tahay, maxaa yeelay waan ku jeclahay habkaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Soo Celiyaha Mawduuca Caadiga ah: U noqoshada interface-ka caadiga ah ee Firefox
Xiiso leh, kuwa aan u adkeysan karin Australiyaanka.
In kastoo aan jeclaan lahaa inaan ogaado ... Markay wax ka daabacaan Ubuntu 14.04!
Hagaag, markii qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha TunLinux ay soo dejiyaan ISO-da oo ay isku dayaan 😉
Waxay noqon kartaa fursaddayda inaan kuugu soo diro boostada… Horeba waan u rakibay illaa Jimcaha.
In kasta oo ay tahay liistadooda soo gelinta haddana waxay hayaan qoraal qabyo ah / qabyo ah oo cinwaan looga dhigay "Ubuntu 14.04 Trusty Tahr Look" oo ay qortay "danintendolinux" haddana waxay u dhowdahay in la daabaco
Zyxx (@abdirizaaq_) dijo
: P !! Minutiae dadka nostalgic jecel inay u isticmaalaan chrome in chrome iyo Firefox ee Firefox XD !!! (PS: O! Ma aanan ogeyn inaad isticmaashay dugsiga hoose, waxaan u maleynayay inaad jeceshahay kde = (
Jawaab ku bixi Zyxx (@electroparanoia)
Waxa aad arkaysaan waa KDE waxaan uga tegayaa inuu dhammaystiran yahay:
Waan ka jeclahay qaabkaas si ka wanaagsan, laakiin waxa aanan garaneyn waa sida loogu beddelo astaamaha KDE Oxygen-ka kuwa loo yaqaan 'eOS kuwa' (kaliya astaamaha KDE Oxygen, oo aan ahayn barnaamijyada sida Firefox).
Aniguna waxaan ku guuleystey inaan waxyar kahormaro isku-darka 'KDE' oo ah a isku darka eOS iyo OpenSUSE ee golaha.
Hagaag, waxaan rabaa xiriirka Australiyaanka ah ee Firefox inuu u soo baxo sida ugu dhaqsaha badan si uu u tijaabiyo (waa hagaag, isla marka ay Firefox 29 iyo Iceweasel 29 soo baxaan, waxaan soo dhigayaa shaashadda Iceweasel oo ay weheliyaan Australis-ka iyo desktop-kayga KDE oo ah isugeyn inta udhaxeysa OpenSUSE iyo eOS (Waa qaab furfuran OpenSUSE oo leh nafta eOS inkasta oo uu yahay Debian).
2da sawir ee aad dhigatay, ma hubtaa inaysan isku sawir ahayn? Sababtoo ah waxaan u arkaa inay isku mid tahay ...: -O
Haa, ma aanan arkin farqigaas yar, ma intaas uunbaa, miyayna ku kala duwaneyn wax kale? Sababtoo ah hadday sidaas tahay, ma fahmi karo sababta "walaac" badan ee ku saabsan is-beddelka interface, haddii aadan 'ha ii sheegin meesha fiirinta, waan ku dhaaran lahaa waa isla sawirkii ...
Aad u wanaagsan, runtii ma aqaano waxa ku waalan badbaadinta booska toosan. Uma arko dhibku inaan ka takhalusay baarka lagu daro ee inbadan oo naga mid ah ay isticmaalaan.
Isbeddellada cusubi waa is-dhexgalno yar-yar oo ay la socoto menus-yada nooca astaanta ah. Cidhifyada wareegsan ee tabsku aniga ayaa i rarta oo i xasuusiya liiska kiniinka.
Joer, waa inaan arkaa wax ka yar bisadda malaasyada, maxaa yeelay ma arko wax kala duwanaansho ah marka laga reebo midka lagu tilmaamay elav, iyo sababta oo ah wuxuu ii sheegay, haddii kale….
Waan necbahay australis iyo isdhexgalka qaab-taabashada
Haddii aad neceb tahay australis aad u badan ... markaa rakib mawduuca "Foxcape" oo dib ugu noqo asalkii! xD
Ku rakib Firefox ESR.
Anigu kuma raacsani kuwa neceb interface-ka cusub runtii waan jeclaa, laakiin sida had iyo jeer ay jiraan laakiin, waxa aan dareemayo ayaa ah inay kordhisay isticmaalka RAM si aad ah - Iyada oo kaliya 3 tab ay furantahay waxay isticmaaleysaa 500 MBs) in kastoo tan Dhibaatada Waxay ka timaaddaa noocii ugu dambeeyay (28), waxaan rajeynayaa in nooca ugu dambeeya dhibaatadan lagu xallin doono.
PS: Waxaan isticmaalayaa Mozilla Firefox Ver. 29 Beta 9
Meh, waxaan isticmaalayaa Iceweasel 28 runtiina waxay tahay in tallaalka isticmaalka kheyraadkaani uu dhacayo oo kaliya markaan fiiriyo Facebook.
Waxaan isticmaalaa dulucda asalka ah, ma aqaano dulucda Australis loola jeedo: S
Ku jawaab angelblade
Wanaagsan Wax mawduuca ka baxsan:
Noocee far ah ayaad isticmaaleysaa markii aad qaadatay shaashadahaas?
Waa la mahadiyey 😀
Maxaa la sameeyaa ka dib rakibidda Slackware? Hagaha degdegga ah ee fudud